कुनै पनि खेलाडी को खुट्टा को आंकडा को एक महत्वपूर्ण भाग हो। शरीर को सबै बल र ऊर्जा केंद्रित छ जो समर्थन, छ - कुनै आश्चर्य तिनीहरूले खुट्टा भन्छन्। बिना बलियो खुट्टा गुणात्मक हुन सक्दैन प्रकृति जगिंग प्रदर्शन बल अभ्यास। खुट्टा मांसपेशीमा र फिर्ता र छाती मांसपेशीमा - मानव शरीर रचनाको विज्ञान मा सबै भन्दा ठूलो पेशी समूह हो, यो मांसपेशी को सौन्दर्य र शक्ति एक विकसित र बलियो शरीर को उपस्थिति संकेत गर्छ। खुट्टा मांसपेशीमा लागि अभ्यास धक्का र खींच मा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। तान्ने अभ्यास तपाईं projectile नै पुल गर्न, काम projectile, वा विपरित आफैलाई ल्याउन भन्ने तथ्यलाई जडान छन्। यस्तो अभ्यास ज्ञात deadlift सबै प्रकार समावेश गर्नुहोस्। कर्षण विभिन्न प्रकारका आधारमा खुट्टा मांसपेशीमा लागि अभ्यास सबै भन्दा राम्रो जांघ को मांसपेशिहरु बलियो बनाउँछ। को खुट्टा को मांसपेशिहरु पम्पिंग लागि पनि projectile तपाईं उनको पेट मा झूट जबकि, यस चाक क्षेत्रमा बिस्तारै बित्दै गर्दा गोडा संयुक्त मा flexion सिफारिश गरिन्छ। यस्तो प्रशिक्षण गर्ने hamstring बलियो अनुमति दिन्छ। खुट्टा मांसपेशीमा लागि धक्का अभ्यास गर्ने खुट्टा मा बल धीरज र शक्ति को विकास गर्न योगदान। यस्तो अभ्यास जो, सायद, यो जांघ मांसपेशीमा विकास लागि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ उठबस समावेश।
क्लासिक सिट-अप तपाईं व्यायाम को अन्य सेट भन्दा धेरै ठूलो प्रभाव दिनेछु। को खेलाडीहरूलाई बीच ज्ञात सबै को खुट्टा मांसपेशीमा लागि सबै भन्दा राम्रो अभ्यास हो। यस मामला मा, हामी मात्र खुट्टा बारेमा पनि शरीर को कंकाल मांसपेशिहरु को वृद्धि कुरा गर्दै छन्, तर। तर व्यवहार उठबस गर्नुपर्छ धेरै ध्यान दिएर किनभने मेरुदण्ड बिगार्न र शरीर को विभिन्न भागहरु को नरम तन्तु पुल सक्नुहुन्छ अनुचित व्यायाम को घटना मा। , तपाईं अलिकति काँध चौडाई भन्दा व्यापक आफ्नो खुट्टा स्थिति आवश्यकता हो, यसलाई एकदम, outwards विस्तार फिर्ता सीधा हुन निश्चित हुन आवश्यक छ जब खुट्टा, मुर्कुट्टा तनाव छ यसलाई राम्ररी गर्न। उठबस खडा रूपमा गहिरो सकेसम्म, तल्ला गर्न समानान्तर स्थिति को आयाम सीमित हुनु हुँदैन। यो रूपमा इच्छित स्तरमा आफ्नो प्रविधी सुधार हुनेछ रूपमा लामो यो व्यायाम मा रड वजन जबरजस्ती गर्न महत्वपूर्ण छ।
को खुट्टा को मांसपेशिहरु लागि अभ्यास राहत दिन मांसपेशी वा मांसपेशीमा रंगरुट गर्न प्रदर्शन हुन सक्छ।
अभ्यास को खुट्टा को मांसपेशिहरु बलियो बनाउन:
सीधा खुट्टा संग deadlift को दृश्य सबैभन्दा जटिल खुट्टा मांसपेशीमा विकास लागि प्रभावकारी हुन्छ। हामी प्रशिक्षण विधिहरू सम्पूर्ण सेट हेर्न भने, फरक लक्ष्य छ सक्छ खुट्टा को मांसपेशिहरु बलियो बनाउन अभ्यास। को खुट्टा फरक टेम्पो राम्रोसँग सञ्चालन गरेर बलियो हुन सक्दैन। Jerks मांसपेशी वृद्धि उद्देश्य हो, monotonous लामो-दूरी चलिरहेको तपाईं खुट्टा भोकमरी र तिनीहरूलाई स्पष्ट राहत दिन अनुमति दिन्छ। तर कुनै जाति deadlifts एक सेट को ठूलो को मामला मा छैन तुलना गर्न सकिन्छ। Deadlift मुख्यतः जांघ पछाडि reinforces। उल्लेखनीय परिणाम - प्रयोग यस लोकप्रिय अभ्यास लागि ठूलो पर्याप्त वजन 100-130 किलो कार्यकर्ता पनि अधिक त हो यहाँ असामान्य हो, र। सही अगाडि र पछाडि सोझो खुट्टा मोड गर्न आवश्यक एक thrust गर्न।
सुत्छन् गर्न अभ्यास खुट्टा मांसपेशीमा:
अर्डर ठीक र स्वास्थ्य नतिजा बिना खुट्टा मांसपेशीमा सुत्छन् मा, तपाईं फरक मांसपेशी समूह लक्षित विशेष व्यायाम को एक सेट प्रयोग गर्नुपर्छ। को quadriceps मांसपेशीमा तपाईं सन्तुलन कायम गर्न भरोसा गर्न सक्छन् भएको स्थिर वस्तु नजिकै स्थिति लाग्न गर्न सुत्छन् गर्न। अर्को, बायाँ हात बाँया खुट्टा को टखने लाग्न र खुट्टा निकाल्न आवश्यक छ। त्यसपछि यो सुरुवात स्थिति बन्न र आफ्नो नितम्ब तपाईं stretching मांसपेशिहरु महसुस सम्म, त्यसपछि सम्म अगाडी झुकाव लाग्छ। यस्तो व्यायाम दुई खुट्टा मा prodelyvat बारी गर्नुपर्छ। यो खुट्टा मांसपेशीमा सुत्छन् महत्त्वपूर्ण छ नितम्ब को नामांकन छ, र छैन खुट्टा आफूलाई खींच द्वारा। खुट्टा मांसपेशीमा stretching लागि अभ्यास मांसपेशिहरु तिनीहरूलाई supple Bole बनाउन अनुमति दिन्छ।
भुइँमा रेल, वा ठूलो बन्न कसरी
को क्रसओभर को हात मा कमी: प्रदर्शन प्रविधी, लाभ र साधारण गल्ती
सपनाहरु को मनोविज्ञान। प्रतीक र सपना विश्लेषण
Google स्टकहरू: मूल्य, उद्धरणहरू, खरिद-बिक्री
तयारी "Arbidol" स्तनपान - लायक जोखिम
Ovesol। Contraindications? उनि लगभग थिए
"खूनी" चलचित्र। अभिनेता र भूमिकाको
Mytishchi मिसिन-निर्माण बोट: इतिहास, उत्पादनहरु
बाड के हो र यसको परिणाम के हुन्?
हुडमा उक्ल भाँडा माउन्ट गर्नुहोस्। कसरी हुडमा एक उडान घुमाउरो स्थापना गर्न र तपाइँलाई सबैलाई चाहिन्छ?
म एक हुड किन चाहिन्छ
वोदका cranberries मा Tincture। नुस्खा tincture Cranberry वोदका